NetBeans 12.1, vhezheni inounza mashoma ekuvandudza eC / C ++, Java uye PHP | Linux Vakapindwa muropa
NetBeans 12.1, iyo vhezheni inounza mashoma ekuvandudza eC / C ++, Java uye PHP
La Apache Software Foundation Sangano yakavhurwa munguva pfupi yapfuura iyo nyowani nyowani yeakabatanidzwa budiriro nharaunda, «Apache NetBeans 12.1«, Iyi ndiyo vhezheni irimo kumwe kutsigirwa kwekuvandudza kunowedzerwa kweC / C ++, Java, PHP uye HTML.
1 NetBeans 12.1 Main Zvitsva Zvimiro
2 Maitiro ekuisa NetBeans 12.1 paLinux?
NetBeans 12.1 Main Zvitsva Zvimiro
Iyi vhezheni itsva yeIDE haiuye neshanduko huru, asi inovandudza zvimwe zvinhu zvemitauro yekuronga yainotsigira.
Uye ndeyekuti mune iyi vhezheni itsva yakaburitswa, kutsigirwa kushoma kweC / C ++ mitauro yakawedzerwa, iyo ichiri kuseri kweakave aburitswa C / C ++ plugins ekuvandudza eNetBeans IDE 8.2.
Zvekuvandudza muC / C ++, rutsigiro rwunopihwa epurojekiti akareruka, ichikubvumidza iwe kumhanya kuumbiridza uye kumhanya mirairo, syntax kuratidza uchishandisa TextMate grammars, uye kugadzirisa uchishandisa gdb.
Zvakare neiyo kupedzisa kodhi uye kumwe kugona kwekugadzirisa inoitwa nekuwana iyo server yeCCLS (Mutauro Server Protocol) LSP, iyo inofanirwa mushandisi kumhanya yakazvimiririra.
Imwe shanduko yakawedzerwa yaive iyo tsigiro yeJakarta EE 8 chikuva, iyo yakatsiva Java EE (Java Platform, Enterprise Edition). Unogona kugadzira mapurojekiti eJakarta EE 8 uye kugadzirisa maMaven mashandisirwo aripo kuti ushandise Jakarta EE 8.
Iyo NetBeans yakavakirwa-mukati Java compiler nb-javac (yakagadziridzwa nejavac) Yakave yakashandurwa kuti ishandise Java 14.
ZveJava, keyword rutsigiro "Rekodhi" yakagadzirwazve kuti ipe compact nzira yekutsanangudza makirasi, kudzivirira kudiwa kwekutsanangudza zvakajeka nzira dzakasiyana-siyana dzakaderera senge dzakaenzana (), hashCode (), uye toString () mune zviitiko zvinochengetwa dhata muminda chete.
Hunhu hwebasa rausina kuchinja. Iyo template nyowani yakawedzerwa kugadzira Java inogadzira ine iro kiyi "rekodhi". Yakagadziridzwa "rekodhi" kodhi yekupedzisa rutsigiro.
Zve Java SE, Gradle kuvaka system rutsigiro inogoneswa. Tsigiro yemadhairekitori akagadzirwa akawedzerwa uye basa rakaringana neanodudzira processors rakave nechokwadi.
ZvePHP, zviito zvitsva zvakawedzerwa kuMunyori menyu kugadzirisa iyo autoloader uye kumhanya zvinyorwa. Mune iyo debugger, panzvimbo ye0 uye 1 mune Boolean kukosha kwemisiyano, manyepo uye echokwadi zvinoratidzwa. Yakagadziriswa maturusi ekuongorora kodhi.
Zve HTML, iyo markup validator chinhu chagadziriswa (anoshanda.jar). Inosanganisira rutsigiro rwekupedzisa mapatani. Wakawedzera rutsigiro rwekupedza kodhi uye syntax inosimbisa yezvakagadzirwa senge « ».
ZveCSS, "Tabs uye Indents" sarudzo dzekumisikidza dzakurudzirwa kudzora induction uye kushandiswa kwetabhu kana nzvimbo.
Pakutanga, inoona iyo JDK yakaiswa paLinux uye macOS ichishandisa SDKMAN toolkit.
Maitiro ekuisa NetBeans 12.1 paLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » NetBeans 12.1, iyo vhezheni inounza mashoma ekuvandudza eC / C ++, Java uye PHP
Purism inotangisa Librem AWESIM